सुबास हुमागार्इं - कान्तिपुर समाचार
एभीएल भलिबल: चितवन टाइग्रेस च्याम्पियन
नेपाली महिला भलिबलमा एकल वर्चस्व जमाएको नेपाल एपीएफ क्लबलाई एकपक्षीय फाइनलमा पराजित गर्दै चितवन टाइग्रेसले आधीआवादी महिला भलिबल लिग (एभीएल) को उपाधि जितेको छ ।
फुटबललाई अर्को जापानी सहयोग
फाल्गुन १७, २०७४
नेपाली फुटबलको विकासमा विगत केही वर्षयता जापानी सहयोग कोसेढुंगा साबित हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि एन्फाको टेक्निकल डाइरेक्टर चियाकी ताकेदाको नियुक्तिबाट सुरु भएको जापानसँग नेपालको सहकार्यले बुधबार नयाँ आयाम लिएको छ । जापानी राजदूतावासले एन्फा मुख्यालयको स्तरोन्नतिका लागि ७४ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।
राम्रो सुरुआतको आस
कार्तिक २५, २०७४
नेपाल र बंगलादेश एसीसी यू–१९ एसिया कपमा शनिबार आफ्नो पहिलो खेल खेल्दै छन् । दुवै टोलीले राम्रोसँग बुझेका छन् यो ‘गर वा मर’ को खेल हो । किनभने जित्ने टोली सेमिफाइनलतर्फ अग्रसर हुन्छ र हार्ने बाहिरिन सक्छ ।
नेपाली टिमको संरचना फेरिँदै
आश्विन १८, २०७४
सुरुआती तीन खेलमा २ हार र १ बराबरी । एएफसी एसियन कप २०१९ को छनोटअन्तर्गत समूह ‘एफ’ मा रहेको नेपाल अहिले एक अंक बोकेर तालिकाको पुछारमा छ । नेपालले हालसम्मका तीनै खेलमा ४–४–२ को संरचना अपनाएको थियो ।
सुबास हुमागार्इंका लेखहरु :
सडक दुर्घटनामा लापर्बाही
सम्पादकीय आश्विन ६, २०७६
कुनै कामका लागि हाँसीखुसी बाहिर निस्केका आम नागरिकमध्ये सात व्यक्ति घर कहिल्यै फर्कन्नन् । कारण– हाम्रो सडक सुरक्षा कति कमजोर र जोखिमपूर्ण छ भने सवारी दुर्घटनामा...
अर्थमन्त्रीको 'चामल' दोकान
हरि रोका आश्विन ६, २०७६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका...
गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैया
सम्झना वाग्ले भट्टराई आश्विन ६, २०७६
विद्या यै नरको छ रूप भरिलो,
अक्टोबर क्रान्तिपछिका सत्तरी वर्ष
अच्युत वाग्ले आश्विन ६, २०७६
सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने...
छाडा पशु व्यवस्थापनको सर्त
डा. किरण पाण्डे आश्विन ६, २०७६
केही समययता नेपाली छापामा छाडा पशुहरूका कारण सिर्जित समस्या तथा समाधानका लागि भएका प्रयासका समाचार प्राथमिकतासाथ आइरहेका छन् । छाडा पशु व्यवस्थापन एउटा प्रमुख समस्या बनिरहेको...